एनआरएनएमा गहिरो अध्ययन आवश्यक : बलराम अधिकारी - दर्पण संसार
एनआरएनएमा गहिरो अध्ययन आवश्यक : बलराम अधिकारी
२०७७ आश्विन २०, मंगलबार ०९:२५ बजे
- बलराम अधिकारी
सम्पूर्ण आदरणीय अभियन्ताहरु जस्ले गैर आवासीय नेपाली संघलाई सत्र बर्षको अवधिमा यहाँ सम्म ल्याउन बिभिन्न तह र तप्कामा रही आफ्नो अमूल्य समय, तन, मन, धन र वचनले सहयोग गर्नु भयो उहाँहरू सबै प्रति मेरो सम्मान छ।
साँचो अर्थमा भन्दा गैरआवासीय नेपाली संस्थमा मेरो खासै केही पनि योगदान छैन तर पनि म गैरआासीय नेपाली नागरिक हुँ र मैले दुई वर्षको लागि £10 तिरेर सदस्यता पनि लिएको छु। त्यसैले त मलाई यस संस्था प्रति चासो हुनु , संस्था सँग सम्बन्धित विषयमा आफूलाई लागेको विचार राख्नु स्वभाविक हो। मिडियामा आएका समाचार र संस्थालाई नेतृत्त्व गर्ने ब्यक्तिहरुको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने अहिले सम्म लिदै आएको सदस्यता शुल्क अब नि:शुल्क गर्ने र एनआरएनएको नेतृत्व चयनका लागि मतदान केन्द्रमा लाइन बस्न नपर्ने जस्ता कुराहरू अहिलेको नेतृत्वले ल्याएको छ। यति ठुलो संस्था दीर्घकालीन योजनाका साथ चलाय मान बनाउनका निम्ति नेतृत्त्व तहमा योग्य, अनुभवि र क्षेमतावन ब्यक्तिका साथै पैसाको पनि त्यतिकै आबस्यक पर्छ। बिना पैसाको कसरी समाज सेवा हुन्छ? महत्त्वपूर्ण कुरा त के हो भने सबै गैर आवासीय नेपाली जनतालाई कसरी संस्था संग आवद्ध गराउने भन्ने नै हो।
मेराे विचारमा सदस्यता शुल्क मिनाह गर्दैमा सदस्य संख्यामा बृद्धि हुन्छ जस्तो लाग्दैन र अर्को कुरा संस्थामा लगानी गरेको छैन भने त्यस प्रति सबै उत्तरदायी हुन्छन् भन्ने पनि छैन। त्यसै त गैह्र आवसीय नेपाली संघ एउटा धनि मानी हरुको क्लव मात्र हो भन्ने आम जनता को बुझाइ छ के अब सर्वसाधारण जनता सँग लिदै आएको सदस्यता शुल्क पनि यो धनीहरूको संस्थालाई नचाहिएकै हो भन्ने प्रश्न जनताको हुन् सक्छ। शुल्क मिनाह गर्ने कुरा त केवल हतारमा आफ्नो पक्षमा चुनावी परिणाम ल्याउन गरिएको चुनावी नारा थियो ।
यो त कुनै व्यक्ति विशेषले आफूलाई पपुलर बनाउने एजेण्डा मात्र हो।न कि संस्थाको दीर्घकालीन हितको बारेमा सोचिएको थियो। के अब साच्चै गैह्र आवसीय नेपाली नागरिकहरुसँग सदस्यता शुल्क बुझाउन सक्ने हैसियत नभएकै हो त? संस्था संचालन गर्न कसले लगानी गर्छ? संस्थामा लगानी भएन भने त्यस प्रति माया मोह कसरी आउँछ? शुल्कमा थप घट गराउनु स्वभाविक कुरा हो। विश्वको ८० देशमा बसोबास गर्ने ५० लाख भन्दा बढी नेपालीहरूको संस्था एनआरएन नै हो भनेर अपनत्व गराउने हो भने केही पैसा र थोरै समय संस्थालाई दिनै पर्छ।
पैसा,समय र अनुभव विना समाज सेवा कसरी सम्भव छ एक पटक नेतृत्त्व तहमा भएका हरुले सोचौं के याे नै विकल्प हो त? के कति कारणले यति धेरै नेपालीहरु विदेशमा भएर पनि यो संस्थामा आवद्ध हुन् सकेका छैनन् यस विषयमा बहस हुनु जरुरी छ। कतै गैह्र आवसीय नेपाली संघले जन चाहना अनुसार काम गर्न नसकेको त होइन्? कि समाज सेवा गर्दा हुनु पर्ने पारदर्शिता देखाउन नसक्दा सदस्यता शुल्क नै नलिए पछि त कसैले पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ नै भएन भन्ने सोचाइ त होइन। यो संस्थाको हरेक कार्यकाल जसले नेतृत्त्व गरे पनि उनीहरूकै राजनितिक बिचार सँग आबद्ध ब्यक्तिहरु,आफ्ना साथी भाइ,आफन्त इष्टमित्र र केही अन्य संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरु भन्दा बाहिर खासै संस्था जान सकेको छैन। संस्थाको पक्षमा आवाज उठाउनेको भन्दा जसको पछाडि धेरै मान्छे छन् उसैको आवाजले मान्यता पाउँछ चाहे त्यो गलत नै किन नहोस। राजनीतिक दलको जस्तो जस्ले सक्यो उसैले नेतृत्त्व कुम्ल्याउने यहाँ कुनै व्यक्ति विशेषले समाज सेवामा कति लामो समय सम्म योगदान गरेको छ त्यसको कदर हुँदैन र अर्को कुरा नेतृत्वको विपक्षमा रहेका हरुको कदर नहुदा संस्था केही ब्यक्तिहरुको समुह जस्तो हुन जान्छ।
गैह्र आवसीय नेपाली संघलाई नेपालकाे राजनीतिले पनि निकै असर पुर्याएको कुरा सत्य हो, एनआरएनएको नेतृत्व गर्नका निम्ति राजनैतिक ज्ञान हुनु आवश्यक हुन्छ। एनआरएनए मात्रै होइन कुनै पनि संघ, संस्था हाँक्नका लागि राजनैतिक ज्ञानको पनि भूमिका रहन्छ तर मेरो विचारमा राजनैतिक ज्ञान हुनु र राजनीति गर्नु फरक फरक कुरा हुन् । एनआरएनए अपवादबाहेक राजनैतिक सिण्डिकेटको आधारमा नै चलिरहेको छ जस्तो लाग्छ किन कि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जित्ने अवस्था अपवादबाहेक प्रायः न्यून नै हुन्छ । अहिलेसम्म यसै गरी चलिरहेकाले यसै गरी चल्न दिनुपर्छ भन्ने कि यो संस्कार बदल्ने ? पहिलाे त यो संस्थामा राजनीतिक चेतनाको भन्दा राजनीतिक दाउपेचको चलखेल बढी हुन्छ। दोश्रो यो संस्थाको नेतृत्व गर्नेले समाज सेवा कम आफ्नो व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति बढी गर्नाले संस्था प्रति आम जनताको विश्वास कम देखिन्छ।
गैह्र आवसीय नेपाली संस्था हामी बिदेशमा बस्नेहरूका लागि सबै भन्दा ठूलो संस्था हो। नेतृत्त्व परिवर्तन भई रहन्छ त्यसैले हरेकले आफ्नो कार्य कालमा आफू खुशी आफनो अनुकुल निर्णय गर्दै जाँदा संस्थाको भबिस्य के होला? झिनो मतान्तरले जितेको अहिलेको नेतृत्वले उसको बिपक्षमा पनि ठूलै मत छ। संस्थाको हितको लागि उनीहरूलाई पनि समेटेर अघि बढ्नु पर्छ। यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो तानाशाही प्रवृत्तिलाई लोकतान्त्रिक पद्धति ले कहिल्यै समर्थन गर्दैन। यस पटकको नेतृत्त्वले मतदान विधिमा नयां प्रविधि भित्रयाउँदै छ। हुन् त हो समय सापेक्ष ढंगले अघि बढिएन भने पछि परिन्छ तर अघि बढ्ने भन्दैमा विधि र प्रक्रियालाई पनि बिर्सन भएन। अब मतदान गर्न लाईनमा बस्न नपर्ने हातको मोबाइल बाट नेतृत्त्व चयन गरिने रे। सूचना र प्रविधिको जमानामा यसलाई असम्भव मानिँदैन तर त्यति नै विश्वसनीय पनि त भन्न सकिदैन किन की यदि विश्वसनीय ठानिन्थ्यो भने विश्वमा यो विधि र प्रक्रियाको विकास भई सक्थ्यो। संसारका कयौं देशमा नेतृत्त्व छनोटका लागि लाईन बसेर नै मतदान गरिन्छ के उनीहरू मा प्रविधि विकास गर्ने क्षमता नभएर हो त? यस विषयमा सबैले एक पटक सोच्ने हो कि।